कुलमानको सपना चकनाचुर हुँदै, नेपाल फेरि अँध्यारो युगमा प्रवेश – Dainik Samchar
January 18, 2021 186
फेरि अँध्यारो युगमा नेपाल
विद्युत प्राधिकरणले अब लोडसेडिङ नहुने दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको दुई सातामै लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजा अघिसम्म तालिका सार्वजनिक गरेर दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । सरकार र प्राधिकरणले अब लोडसेडिङ नहुने दाबी गरे पनि अन्ततः तालिका सार्वजनिक गरेर लोडसेडिङ सुरुआत भएको छ ।
यही माघ ४ गते आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । लोडसेडिङ गर्नुको कारणबारे जानकारी नदिई जुम्ला वितरण केन्द्रले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको हो । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख कुलमानले सुरुआत गरेको उज्यालो नेपालको अभियानलाई अन्त्य गर्दै जुम्लाबाट मुलुक अँध्यारो युगमा प्रवेश गरेको हो ।
Prevजति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! नपढे तपाइलाइ पछुतो हुनेछ ।
Nextके भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म, किन चिकित्सक यसरी चुक्छन् बेला बेलामा ?